The Complete Burmese Universal Declaration of Human Rights
The Burmese Myanmar UDHR
The Burmese Universal Declaration of Human Rights is at this present moment only available in pdf format.
For Mobile Users its not so suitable .
If you areaTablet or Desktop user you can CLICK HERE .
လူတိုင်းသည် တူညီ လွတ်လပ်သော ဂုဏ်သိက္ခါဖြင့် လည်းကောင်း၊ တူညီလွတ်လပ်သော အခွင့်အရေးများဖြင့် လည်းကောင်း၊ မွေးဖွားလာသူများ ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့၌ ပိုင်းခြား ဝေဖန်တတ်သော ဉာဏ်နှင့် ကျင့်ဝတ် သိတတ်သော စိတ်တို့ရှိကြ၍ ထိုသူတို့သည် အချင်းချင်း မေတ္တာထား၍ ဆက်ဆံကျင့်သုံးသင့်၏။
Credits : www.omniglot.com